version 0.5.0 – Back up လုပ်ထားပါ
မတ်လ 24, 2010 အားဖြင့် ကမ်းလှမ်းမှု7comments
ဒီနေ့ကများသောအားဖြင့်မေတ္တာရပ်ခံခဲ့ကြနှစ်ခု features တွေကိုပံ့ပိုးအဖြစ် plugin ကိုမှအတော်လေးအဓိကအပြောင်းအလဲဖြစ်ပါတယ်သော v0.5.0 ပြန်လွတ်လာပါပြီ.
ပထမဦးဆုံးတ plugin ကိုအတွင်းအပြင်ကနေ backup တခုကိုဝန်ဆောင်မှုထည့်သွင်းသည်. တစ်ခုခုအကြားကို manually back up လုပ်တဲ့ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်, backup တခုကိုနေ့စဉ်သင်အဘို့ပြုရှိခြင်းသို့မဟုတ် backup လုပ်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဖြစ်ပျက်ခွင့်ပြုထားခြင်း. Backup ကသာလူ့ဘာသာပြန်ချက်များကိုအဘို့ပြုနေသည်, နှင့်တိုက်ရိုက် backup လုပ်ထား mode မှာ, plugin ကိုရိုးရိုးလေးကို backup service ကိုရန်ဘာသာပြန်ချက်အသစ်ကိုပို့ပေး.
ဒီ backup လုပ်ထား service ကထိပ်ပေါ်တွင် run google မှာ appengine အခြေခံအဆောက်အဦများ, ထို့ကြောင့်၎င်း၏အတော်လေးအစာရှောင်ခြင်းနှင့်ချိန်တွယ်.
ဒုတိယအင်္ဂါရပ်ထု translate စက်ရုံဖြစ်ပါသည်, ယခုအခါ transposh settings စာမျက်နှာတွင်ထည့်သွင်း. သင်သည်ရုံထိမှန်နိုင် “အားလုံးအခုဆိုရင် Translate” ခလုတ်နဲ့တိုင်းစာမျက်နှာနဲ့ post သင်တို့အဘို့အဘာသာပြန်ထားသောလိမ့်မည်, နှေးနှေးကွေးကွေးပေမယ့်ဧကန်အမှန်. ထိုဘာသာပြန်နေ client ဘက်မှာပြုကြောင်းမှတ်ချက်, မဟုတ် server ကိုဘက်ခြမ်းနှင့်လုံလောက်သောရှာဖွေပေးပို့ရန်နှင့်အတူသင့်ရဲ့ server ကိုအဘယ်သူမျှမကြောက် automated ဘာသာပြန်ချက်ဝန်ဆောင်မှုအလွဲသုံးစားရှိပါတယ်ဒါကြောင့်.
ထိုဆီသို့ဦးတည်နောက်တစ်နေ့ဖြန့်ချိ 0.6.0 ဗားရှင်းကို user အပေါ်မှာပိုပြီးအာရုံစူးစိုက်ပါလိမ့်မယ် (ဘာသာပြန်သူ) အတွေ့အကြုံနဲ့ multi-lingual ဘလော့ဂ် wrtiting ပေါင်းစပ်ခြင်း.
သင့်ရဲ့စိတ်ကူးတွေကိုအမြဲတမ်းကြိုဆိုနှုတ်ခွန်းဆက်သပါသည်, တော့ဒီမှာမှတ်ချက်ပေးရန်သို့မဟုတ်သွား trac.transposh.org.
အောက်တွင်တင်သွင်း: သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကြေညာချက်များ အတူ Tagged: backup လုပ်ထားန်ဆောင်မှု, ထိန်းချုပ်မှုစင်တာ, လွှတ်ပေး, trac, wordpress မှာ plugin
မတ်လ 31, 2010 တွင် 11:53 နံနက်
hi, ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ site ပေါ်တွင် plugin ကို အသုံးပြု. နှင့်ရလဒ်များအပေါ်အရမ်းပျော်နေကြတယ်. ဒီဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်အပိုဘာသာစကားထည့်သွင်းအတွက်အခက်အခဲအဘယ်သို့သောအလျှင်သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဧည့်သည်များစကော့ဘာသာစကားမှာ site ကိုဘာသာပြန်ဆိုနှင့်ကြည့်ရှုဖို့အခွင့်အလမ်းကိုပူဇော်နှင့်အံ့သြချင်ပါတယ်?
မည်သည့်အကူအညီ / တုံ့ပြန်ချက်အများဆုံးနားလည်တန်ဖိုးထားသည်. Thanks for the great plugin 🙂
မတ်လ 31, 2010 တွင် 1:40 ညနေ
ဇွန်လ 18, 2010 တွင် 3:38 ညနေ
ကိုယ့်ကြောင့်တစ်ဦးသွားပေးနဲ့ငါပေါ်လေဘယ်လိုသိစေပါလိမ့်မယ်. ကျေးဇူးပါပဲ, still an excellent plugin 😉
ဧပြီလ 1, 2010 တွင် 4:36 ညနေ
Very good 🙂 One more function, သင်ကခေါင်းစဉ်သို့ add နိုင်ပါတယ်, ဘာသာစကားများအချို့ Identification… ကျွန်တော်မသိပါ… google မှာဒီသတင်းစကားဖြင့် webmastertools သောကြောင့်,:
ပျောက်ဆုံးခေါင်းစဉ် tags များ 0
ခေါင်းစဉ် tags ကို Duplicate 1,139
Long ကခေါင်းစဉ် tags များ 0
တိုတောင်းသောခေါင်းစဉ်ကို tags များ 0
non-မှသိကောင်းစရာများခေါင်းစဉ် tags များ 0
ခေါင်းစဉ် tags ကို Duplicate သေးငယ်တဲ့ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်, but problem 🙂
ဧပြီလ 16, 2010 တွင် 6:13 ညနေ
စီမံခန့်ခွဲသူသည်ငါ့ comment ကိုမှ reply နိုင်သလား? 🙂
ဧပြီလ 16, 2010 တွင် 7:23 ညနေ
ခေါင်းစဉ် tags များနှင့် meta tag များကိုလည်းထားသောနေကြတယ်, ထို frontend interface ကိုမရှိဘူးပေမယ့်, ဒီအပေါ်အလုပ်လုပ်ခဲ့လျက်ရှိသည်. အခုအတွက်တော့ – ဒီ fixed ရမယ့်အမြန်လမ်းဘယ်နေရာမှာမဆိုတစ်ဦး post တွင်သင်သည်ခေါင်းစဉ်အတွက်အသုံးပြုတဲ့စာသားထားရန်ဖြစ်ပါသည် (ပင်ပုဂ္ဂလိကတယောက်) နှင့်ဘာသာပြန်ချက်အင်ဂျင်ဒီပြုပြင်ကြကုန်အံ့.
ဧပြီလ 4, 2010 တွင် 4:54 ညနေ
ကျွန်မဒူနှင့်ပနျခြာပီသည်ဘာသာပြန်ဆိုသူအကြံပြုနိုင်ပါစေ ? ကျနော်ပါကစ္စတန်ရှိဖြေဆိုသူများနှင့်သူတို့တောင်းဆို. ပါကစ္စတန်ရှိအများစုဟာအဖြစ်အိန္ဒိယအတွက်အချို့သည်ဤဘာသာစကားနှစ်ခုစကားပြော.